मिजासिलो स्वभावका गिरी विभिन्न क्षेत्रका कार्यानुभवले खारिएका छन् । स्कुल स्तरबाट जुनियर रेडक्रस सर्कल लगायत विभिन्न समितिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाएकैले हुनसक्छ हालसम्म उनी हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदा नेतृत्व तहमै हुन्छन् । बाबु विश्वराजको २० औं वर्षदेखिको विकास अभियानको सक्रियताले पनि आफूलाई सामाजिक अभियानमा लागिपर्न प्रेरणा दिएको गिरी बताउँछन् । गिरी सन् २००२ देखि २००६ सम्म स्वयम्सेवी भएर रेडक्रस लगायत सामाजिक अभियानमा लागिपरे । बालकल्याण समाज मकवानपुरले सञ्चालन गरेको बाल संरक्षण सम्बन्धी परियोजनामा उनी कार्यक्रम संयोजकका रुपमा सक्रिय रहे । हिमराइट्स नेपालको युवा सरोकार सम्बन्धी कार्यक्रममा कार्यक्रम संयोजक, एबीसी नेपालको किशोरकिशोरी अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकको भूमिकामा उनले कार्य गरे । यस्तै, जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मूल्याङ्कनकर्ताका रुपमा मकवानपुरका साविकका विभिन्न गाविसमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । बालविवाहको अवस्थाबारे अनुसन्धानकर्ताका रुपमा भूमिका, विभिन्न अनुसन्धानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनले नेपालमा पहिलो पटक भएको ‘नेपाल बालिका सम्मेलन २०७२’ मा पनि मकवानपुरमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । यस्तै, गिरीले नेपालमा सम्पन्न संविधानसभाको चुनावमा “चुनावमा बालबालिका प्रयोगका विषयमा पर्यवेक्षणको भूमिका पनि निर्वाह गरे ।
तपाई विशेषत: बालबालिका तथा युवाका क्षेत्रमा विभिन्न अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बालबालिका तथा युवासँग सम्बन्धी अहिलेका सवाल के हुन् ?
बालबालिका, युवाका अलावा तपाई अन्य विभिन्न सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । रेडक्रस अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले पनि विभिन्न सामाजिक अभियानमा अभियन्ताका रुपमा आफू अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुहुन्छ । यो सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने सोच अथवा प्रेरणा चाँही तपाईंले कसरी पाउँनुभयो ?
समाजमा बोल्नुपर्ने, आवाज उठाउनुपर्ने अथवा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय अनेक छन् नि तपाई किन विशेषत : बालबालिका र युवाका सवालमा बढी सक्रिय ?
तपाईंले विभिन्न देश घुम्नुभयो । ति देशहरुमा नेपालीपन, नेपालीको अवस्था, सवाल चाँही के पाउँनुभएको छ ?
तपाईंसँग पत्रकारिताको पनि अनुभव छ । हेटौंडाबाट प्रकाशन हुने कुराकानी साप्ताहिकमा जोडिनुभएको थियो । के लागेर पत्रिकामा संलग्न हुनुभएको थियो ?
नेपालमा माओवादी जनयुद्घका बेलामा म हेटौंडाबाट प्रकाशन भएको कुराकानी साप्ताहिकमा रिपोर्टरको भूमिका अनुभव बटुले । पत्रकार साथीहरुसँग रिर्पोटिङ्का लागि विभिन्न ठाउँमा पुगियो । पत्रकारिता,मिडियालाई वास्तवमा त्यतिकै राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको होइन । पत्रकारितामार्फत समाजको सकारात्मक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । म सामाजिक अभियानमा बढी सक्रिय भएँ । पत्रकारितालाई नै मूल पेशा बनाएर भने अघि बढिएन, एउटा समय थियो त्यो, साथीभाई थिए पत्रकारिता बुझ्ने मौका मिल्यो बस यति ।
विभिन्न अभियानमा व्यस्त भइरहनुभएको बेलामा हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनुभयो । आफ्नो कार्यानुभव, देश विदेश घुम्दा प्राप्त अनुभव सुनाइदिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद ।
तपाईलाई पनि म सँग कुराकानी गर्नुभएकोमा धन्यवाद । विभिन्न सामाजिक अभियानमा लाग्ने अवसर प्राप्त गरेको थिए । अहिले पनि लागिपरेकै छु । मैले सिकेको बुझेको कुरा आफ्नो सञ्चारमाध्यममार्फत पाठक समक्ष पु¥याउँदा त्यसबाट धेरैलाई प्रभाव पर्छ भन्ने सोचले नै मलाई तपाईले स्थान दिनुभएको हुनसक्छ यसका लागि म आभार व्यक्त गर्दछु । जीवनको हालसम्मको भोगाईमा बालबालिका तथा युवाका सवालमा विभिन्न अभियानमा लागिपरेको कार्यानुभव म सँग छ । यी अनुभवलाई धेरै समक्ष पु¥याउन पाउँदा मलाई पनि खुशी लागेको छ । वास्तवमा हामी आफूले देखे, भोगेका कुरा बाड्याँै भने कसैका लागि केही गर्ने सोच पनि बन्न सक्छ । नेपालमा अहिले कति युवा काम पाइएन, बेरोजगार भइयो भनेर निराश भइरहनुभएको छ । यो कुराकानी गर्दागर्दै पनि कतिपय युवा विदेश गइरहनुभएको होला । हामी त्यति धेरै निराश र त्यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्ने देशमा छैनौं । विस्तारै विकास समृद्घि आउँदैछ । प्रतिक्षा गरौं, समृद्घि सम्भव छ हाम्रै पालामा । मलाई अन्तरवार्ताको लायक ठानेर केही मेरा व्यक्तिगत, केही सामाजिक अभियानसँग जोडर कुराकानी गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईं लगायत तपाईको मिडियालाई फेरी पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
-प्रस्तुती: शिव चौलागाईं/हेटौंडा